စဈကောငျစီဖှငျ့တဲ့ကြောငျးတှမှော မတကျကွတဲ့ ကလေးငယျလေးတှအေတှကျ အင်ျဂလိပျစာနဲ့ကှနျပြူတာကို အခမဲ့သငျကွားပေးနတေဲ့ ပွညျသူမြား – Shwe Nay Chi
စဈကောငျစီက ဖှငျ့လှဈတဲ့စာသငျ ကြောငျးတှမှော ကြောငျးမထားခငျြကွတဲ့ ကြောငျးသားမိဘတှမြေားစှာရှိနသေလို ဗုံးပေါကျကှဲပွီး သားသမီးတှထေိခိုကျမှာစိုး၍ ကြောငျးမထားကွတဲ့ မိဘတှလေညျးရှိနခေဲ့ပါတယျ။
ယခုဆိုရငျမွနျမာနိုငျငံတဈဝှမျးက စာသငျကြောငျးတှမှော ကြောငျးတတျနကွေတဲ့ ကြောငျးသူကြောငျးသားအရအေတှကျဟာ အနညျးငယျသာရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ယနမှေ့ာတော့ ပွညျသူတှဟော စဈကောငျစီဖှငျ့တဲ့ကြောငျးတှမှော မတကျကွတဲ့ ကလေးငယျလေးတှအေတှကျ အင်ျဂလိပျစာနဲ့ကှနျပြူတာကို အခမဲ့သငျကွားပေးနကွေပါတယျ။
KNU တပျမဟာ (၆ )နယျမွေ. ဒူးပလာယာခရိုငျ လေးကကေျောမွို့သဈမှာ အဆိုပါအခမဲ့ကြောငျးလေးကို ဖှငျ့လှဈခဲ့တာဖွဈပွီး အနီးပတျဝနျးကငျြရှာတှမှောရှိတဲ့ ကလေးငယျတှမြေားစှာလာရောကျပွီး သငျကွားနကွေပါတယျ။
အဆိုပါကြောငျးမှာ အင်ျဂလိပျစာနဲ့ ကှနျပြူတာကို သငျကွားပေးနတောဖွဈပွီး ယခုဆိုရငျကြောငျးသူကြောငျးသား(၄၀၀) ကြျောအထိ လာရောကျကြောငျးတတျနကွေပွီဖွဈပါတယျ။ရှိတာလေးတှနေဲ့ အဆငျပွအေောငျပွုလုပျပွီး အခမဲ့ပညာသငျကွားပေးနကွေသူတှကေို ပွညျသူတှကေ ခြီးကြူးနကွေပါတယျ။
စစ်ကောင်စီဖွင့်တဲ့ကျောင်းတွေမှာ မတက်ကြတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကွန်ပျူတာကို အခမဲ့သင်ကြားပေးနေတဲ့ ပြည်သူများ
စစ်ကောင်စီက ဖွင့်လှစ်တဲ့စာသင် ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းမထားချင်ကြတဲ့ ကျောင်းသားမိဘတွေများစွာရှိနေသလို ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး သားသမီးတွေထိခိုက်မှာစိုး၍ ကျောင်းမထားကြတဲ့ မိဘတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ယခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းက စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းတတ်နေကြတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားအရေအတွက်ဟာ အနည်းငယ်သာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ ပြည်သူတွေဟာ စစ်ကောင်စီဖွင့်တဲ့ကျောင်းတွေမှာ မတက်ကြတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကွန်ပျူတာကို အခမဲ့သင်ကြားပေးနေကြပါတယ်။
KNU တပ်မဟာ (၆ )နယ်မြေ. ဒူးပလာယာခရိုင် လေးကေကော်မြို့သစ်မှာ အဆိုပါအခမဲ့ကျောင်းလေးကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေမှာရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေများစွာလာရောက်ပြီး သင်ကြားနေကြပါတယ်။
အဆိုပါကျောင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ကွန်ပျူတာကို သင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီး ယခုဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသား(၄၀၀) ကျော်အထိ လာရောက်ကျောင်းတတ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှိတာလေးတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ပြီး အခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးနေကြသူတွေကို ပြည်သူတွေက ချီးကျူးနေကြပါတယ်။